आदम ललाण बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू आदम ललाण बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नाम निकनाम गरेको छ; "श्रीमान् राम्रो लाग्यो।"। हाम्रो आदम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै थोरै ज्ञात तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा जान्छ तर कम्तीमा पनि हाम्रो आदम ललानाको बायो लाई विचार गर्नु पर्छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
सुन्दर आदम डेभीड ललाणा मा 10th दिन मा स्टे अल्बान, हर्टफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम मा जन्मेका थिए।
उनी आफ्नो स्टब अलबान्न्समा प्रारम्भिक बिरोध भएको थियो तर उनी5बर्षको हुँदा बर्नमाउथको आइन्डर्ड क्षेत्रमा जानुभयो। उहाँले कार्पस क्रिस्टी स्कूलमा भाग लिनुभयो। पछि सेन्ट पीटरको क्याथोलिक व्यापक विद्यालय।
बच्चाको रूपमा, ललनले उनको पिता जस्तै एवर्टनलाई समर्थन गरे। उहाँ आफ्ना आमाबाबुको दाजुभाइमा स्पेनिश जातिको हुनुहुन्छ।
ललाणा बर्नमाउथ केन्द्र एक्शनल्यान्स को सदस्य थिए, जहां उनको दक्षिणमप्टन देखि एक प्रतिभा स्काउटर ले देखा पर्यो। सितंबर 12 मा एक 2000 वर्ष को रूप मा उनले प्रीमियर लीग क्लब को संत एकेडेमी मा शामिल हो।
ललायनले आफ्नो युवा क्यारियरको साथ शुरु गरे बौर्नेमौथ हस्तान्तरण गर्नु अघि साउदाम्पटोन 2000 मा, जहाँ उनले आफ्नो अकादमी मा विकसित गरे र 2006 मा पेशेवर बन्यो। उनले अन्तमा उनको नाम साउथामप्टन गरे। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
शारीरिक आकर्षण आकर्षणका आँखामा छ। यो आदम र ईमी को लागि मामला हो जो दुवै राम्रो लग रहे हो। एलीको सुन्दरता र कामुकताले के गरेमा आदमले उनको प्रेममा पतन गर्यो।
उनीहरूको प्रेम सम्बन्धी पहिलो पटक बर्नमाउथमा भएको बेला जीवनमा झन् झन् झन् झन् झन् झन्झन्झट भयो। जो जोडी सात वर्षको लागि डेटिङ भएको थियो, र 14 जुन 2014 मा विवाह गर्नु भएको थियो, जो इटालीसँग इङ्गल्याण्डको ओपन विश्व कप म्याचसँग मेल खाएको थियो। तिनीहरू अझै पनि डोर्ससेटमा पोल दर्ता कार्यालयमा विवाह गरे। एक साथ, उनीहरु दुई छोरा छन्, आर्थर माइकल, 26 सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 2012 र अल्बिय जर्ज मा3जून 2015 मा जन्मे।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फुटबल खेल्नु अघि आदम ललन एक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आयो। उनको पिता दाऊदले एक हेरचाह घर चलाए, र यसैले ललायनले आफ्नो प्रारम्भिक वर्ष पुरानो, जो स्पष्ट रूपमा सोच्न असमर्थ छन्, बीचमा जीवन बिताए, उलम्बन र मर्नु। पछिल्ला दिनमा, आदम ललानालाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई हराउन प्रयोग गरिएको थियो।
आदम ललनका बुबाको बारेमा थप: आदम लल्लानाका पिता, डेभीड लेलनले चित्रण गरेको फ्र्याममासन हो।
फ्रिमेसोनेरी संसारको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो गैर-धार्मिक, गैर-राजनीतिक, बहिनी र धर्मार्थ संस्थाहरू हुन्। यसको जड मध्ययुगीन stonemasons को परंपराओं र समारोहों मा झूठ जो ब्रिटेन को कैथेड्रल र महलों को निर्माण गरे। केही राप्ती अझै पनि मनाईन्छ।
हालैमा, लामो समयदेखि फ्रान्समा डेल्ल ललाना बेलायतीको सबैभन्दा नयाँ फ्याक्ट्री-फिक्स्ड मेसोनिक लजको संस्थापक मालिक बने। खेलकुदको जमिनमा मद्दत गर्नको लागि उनले स्टेडियममा साउन्टामप्टनको फुटबल लज प्रयोग गर्न प्रयोग गरेका छन्।
तलका साथीहरूसँग सुरुवात मनाउन डेभिड ललाना हो।
यो स्काउटिंग लज, रग्बी लज र एक motorsports लाज को शुभारंभ पछि, पछिल्लो चार वर्ष मा प्रांत मा स्थापित चौथा विशेषज्ञ लॉज हो।
आफ्नो छोरालाई आफ्नो विरासत पठाउन बारेमा, डेभीड लेलाना एक पटक भन्नुभयो ..."आदमले मलाई फ्रिमेसोनेरीको बारेमा धेरै जान्दछ," एक गर्व दाऊद, जसले पिचमा फ्रिमेसोनेसनको प्रभावको अध्ययन गरेको छ। अन्तमा, डेभीड ललानाले एकपटक फ्रिमेन्सन तथ्याङ्कहरू देखाए, जसले यसले देखाएको छ कि यसले बेलायतमा फुटबलको नियम बनाउँछ। उनको शब्दहरुमा ... "मैनचेस्टर शहर फ्रिमेसेन्सबाट जमानत हुनुपथ्र्यो, त्यसकारण तिनीहरू उनीहरूको पीला नीलो शर्ट र सेतो शर्टमा खेल्छन्। यसैले, लिभरपूल एफसी को एक मस्जिद द्वारा स्थापित गरियो र Anfield फील्ड द्वारा अझै पनि भेटिन्छ। अन्तमा, श्री अल्फ रामेई, इङ्गल्याण्डको एकमात्र विश्व कप विजेता प्रबन्धक एक मेसन थियो। "
मातृभाषा: शेरोन ललला चित्रमा राखिएको चित्रमा आदम लल्लानाको आमा हो।
त्यो आमा संग चित्रित छ ल्यूक श, जोन शव उनको सबैभन्दा राम्रो मित्र हो। गर्व mums शेरोन ललाना र जोना श, जसका पुत्र आदम र लूका फुटबलरहरू उनीहरूको मातृत्वको गर्वमा गर्व हुन्छ जब उनीहरूले इङ्गल्याण्ड पिचमा दुवैको लागि खुशी पाउँछन्।
सिस्टर: तल नै नेटली ललन, आदम ललाणा को एक मात्र बहिनी र भाइ हो। नलाली आदमको सल्लाहकार र प्रबन्धक हो।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
आदम ललाना उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
आदम ललानाको शक्ति: व्यक्तिगत नोटमा, आदम ललाना विश्वसनीय, धैर्य, व्यावहारिक, समर्पित, आफ्नो सम्बन्धमा जिम्मेवार र धेरै स्थिर छ।
आदम ललानाको कमजोरीहरू: कहिलेकाँही, आदम जिद्दी हुन सक्छ, मालिक हो, असम्भव।
आदम ललाणालाई मनपर्छ: उहाँले बागवानी, खाना पकाउनु, संगीत, रोमान्स, उच्च गुणस्तरको कपडाहरू र हातले काम गर्दै माया गर्नुहुन्छ।
आदम लेलानाले नमनपराउने: आदम उनको अपेक्षाको विरुद्ध अचानक परिवर्तनहरू, विवादहरूबाट जटिलताहरू र कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा।
संक्षेपमा, आदम व्यावहारिक र राम्रो-आधारित छ। उहाँले प्रेम र सौन्दर्य घनिष्ठ प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने आफ्नी श्रीमती इमिली जुबले उसलाई दिन्छन्। एक कामुक र सामरिक व्यक्तिको रुपमा, आदमले छुट्याउँछ र सबै इन्द्रहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वाद दिन्छ।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उत्तम मित्र
Tउसले जोडा (आदम ललाना र बीचको स्नेह) जोर्डन हेन्डसन) साँचो हो।
तिनीहरूले फेब्रुअरीमा एकअर्काको विरुद्धमा बाँचिरहेका छन्, फोर्टको वरिपरि नैथानील क्लाइनसँग Merseyside र इम गर्न सक्छ नजिकै।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -एउटा मोडल
2014 मा, एक पटक उनको शरद / शीत संग्रह को बढावा दिन ललाना एक फ्रान्सेली कनेक्शन मोडेल को रूप मा हस्ताक्षर गरियो। उनले आफ्नो फैशन फोटो शूट संग एक साक्षात्कार मा प्रकट गरे एस्क्वायर म्यागजिन। तल उहाँका सङ्ग्रहहरू छन् जुन साँच्चै उनीहरूलाई सबैभन्दा सबैभन्दा कामुक फुटबलर जीवित बनाइएको छ।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -फ्रोजन फिनेट
ललानाले एकपटक उनको Instagram पृष्ठमा पेट-चर्निंग स्न्यापलाई साझेदारी गर्यो - जसले एक्सएनएनएमएमएमएमएम अनुयायी अनुयायीहरू देखाउँछ।
उनले चित्र चित्रण गरे: "खुट्टालाई पराजित गर्न कुनै सुझाव। #फिल्टर बिना।" इङ्गल्याण्डको पुरुष पुष्पलालहरू छेउमा थिए र प्रिमियर लीगको विद्रोह पछि विद्रोह गर्ने सेतो रङ बनायो। उनको छवि उनको सोशल मिडियाबाट मिश्रित समीक्षाहरूको साथ भेटियो।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -टाटु
सुन्दर स्टारले उनीहरूको स्याङ्किङ्गको माध्यमबाट केही अनौठो विवरणहरू छन्, टेटोस आफ्नो पक्षको लम्बाइमा विस्तारित छन्।
एडम ललाना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -फ्यानको माया
एक पटक, तल चित्रित ट्याटू सोशल मीडियामा भाइरल भयो। एक अज्ञात लिभरपूल फ्यानले उनको जांघमा गरेको 'आदम लल्लाना अनुहार' पायो, प्रशंसकहरूको मनोरञ्जनको लागि धेरै।
तर यो बाहिर जान्छ टुक्रा वास्तव मा एउटा मित्र को श्रद्धांजलि हो जुन बित्यो र हामी तपाईंलाई राम्रो देखिने राम्रो ब्याक-कहानी संग आउँछ।
उनको शब्दहरुमा...। "मैले यहाँ बस्छु संयुक्त राज्य अमेरिका नाशविले मा ट्याट पाउनुभयो। मैले यो सोमवार (जुन फ्रान्सेन 6, 2017) मा गरेको छ, तर म केही कामको लागि प्रतीक्षा सूचीमा भएको छ यो काम गर्न। "किन आदम लेलाना?" र "मैले किन टटुट पाएको छु?" दयालु हात हल्लाउन। म केही वर्ष पहिले केंटकीमा बसिरहेको थिएँ र मैले एक मित्रलाई Paige भनिन्। मैले उनलाई लिवरपोलमा पेश गरे र तिनी पनि एक प्रशंसक बने। जब हामी आदम ललाना मा हस्ताक्षर गरे, Paige वास्तव मा उनको रुचि ले लिया र उनको पसंदीदा हो किनकी त्यो धेरै सुन्दर छ। बिग बगैचा उनको बिटमा, मैले उसलाई "आदम ललाना" भनिन् - त्यो कष्टप्राप्त हुनेछ, तर अन्तमा, यसले सधै उनको मुस्कान बनायो। 2014 मा, मेरो मित्र Paige बीमारीको कारणले बित्यो। एक वर्ष पछि, मैले सोचे, "Paige को श्रद्धांजलि को रूप मा एक टैटू मिलेगा", तर म हासिल गर्न को फैसला मा नहीं सका। म 2015 मा नाशभिले गए, र यहाँ स्थानीय समर्थक समूह लिभरपूल (द नाशविल कोप) मा शामिल भए। जब म एक पब एक दिन एक मिडिया हेर्दै थिए, आदमले "खेलाडीको वर्ष" लाई केही गरे र मैले "Paige" को सोचे। यसले मलाई सम्झना गरीरहेको छ। म दुखाइ थियो कि Paige चला्यो, तर म त्यो स्मृति थियो। यसैले मैले टटू प्राप्त गर्न निर्णय गरें।
मैले व्यक्तिगत रूपमा जान्नुभएका व्यक्तिहरूले सबैलाई माया गर्थे र सोचे कि यो शानदार थियो। इन्टरनेट एकदम फरक कथा हो। त्यहाँ सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीहरूको बीचमा 50 / 50 विभाजन देखा पर्दछ। म यसको बारेमा धेरै पढ्नदेखि जोगिन प्रयास गरिरहेको छु। सामान्यतया सामान्य टिप्पणीहरू हो- शरीरको शंका गर्दै, मानिसहरू नकारात्मक हुन्छन्-तर त्यसो भए पनि त्यहाँ मानिसहरू पनि छन् जुन मैले आफ्नो दिन बनाएको छु र उनीहरुलाई हँसिलो बनाउँथे, वा अब लामा टैटूहरू, हाहा। ईमानदारीसाथ, म यसलाई हेर्दा, मलाई मलाई मुस्कुराउँछ। म मेरो साथी Paige को विचार गर्दछु र मलाई लाग््छ कि त्यो एक लात देखि बाहिर छ। मेरो फैंसी हरेक पटक हेर्दै हँसिन्छ, त्यसैले यसले उसलाई आनन्द दिन्छ। मेरो साथी सबैले यो माया गर्छन, र आदम ललाना आफैले हल्लाए र अनुमोदित भए, त्यसैले म पनि संग खुसी छु। जहाँसम्म भाइरस कुरा हो, यो दयालु तरिका हो। मैले भर्खरै ट्याट्ट पाएँ र यसको केहि पनि सोच सोचेँ। केटा, म गलत थियो। "
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो आदम ललाल बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
साउथामटन फुटबल डायरी